WARAYSI ku saabsan qarax khasaare geystey oo kadhacay Muqdisho. – Radio Daljir
WARAYSI ku saabsan qarax khasaare geystey oo kadhacay Muqdisho.
Noofember 26, 2016 6:42 b 0
Muqdisho, Nov 26 2016–Qarax khasaare geystay ayaa Maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Waabari nawaaxiga Wadada Afisyoon
Goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa la sheegaya in saacado ka hor uu maray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.Waxaana sheegay in la qabtay ninkii ka dambeeyay Qaraxa. iyo Afar qof oo kale oo laga qabtay goobta uu Qarax kadhacay.
Hadaba Qasaaraha kadhashay qaraxaasi iyo Askar katirsan ciidamada Dowlada shabaab isludhoobay iyo Weerar laguqaaday Saldhig ciidan oo ay kutaba baranayeen kooxada alshabaab meel Dagmada Qoryoolay ujirta 40kmtir dhanka Galbeed
Hadaba goob jooge kusugan Magaalada Muqdisho magaciisana uqariyay sababo amin kana mid ah dadka deegaanka qoryooley ayaa arimahaasi uga waramay Wariye xasan heykal
DHEGEYSO-Roob doon looga dhawaaqay magaalada Buuhoodle.